Baaritaanka PSA ee qanjirka shahwada ragga sameeya (prostata) - 1177 Vårdguiden
Maxaan ugu dhiibayaa tijaabada PSA-da?
Qanjirka shahwada ragga sameeya wuxuu ku dhex yaalaa jidhka, guska korkiisa.
Qanjirka shahwada ragga sameeya wuxuu ku dhex jiraa jidhka, dhinaca guska korkiisa. Waxaad dhiibi kartaa tijaabo dhiig ah oo loo yaqaano tijaabada PSA-da, haddii dhakhtarkaagu uu u maleynaayo inuu isbeddel ku dhacay qanjirkaaga shahwada ragga sameeya.
Waxa laga yaabaa inaad tusaale ahaan u baahato inaad marar badan kaadido, ama aad ku kaadido xawaaro yar, haddii qanjirka shahwada ragga sameeyaa uu wax iska bedelay. Daryeel caafimaad raadso haddii ay taasi kugu dhacdey. Qanjirka shahwada ragga sameeya wuxuu ku dhex yaalaa jidhka, guska korkiisa.
Maxay tusi kartaa tijaabada PSA-du?
Qanjirka shahwada ragga sameeyaa wuxuu soo saaraa walax loo yaqaan PSA. Tijaabada ayaa muujinaysa inta PSA ku jirto dhiigga. PSA da dhiiga ku jirta ee badan ayaa macnaheedu noqon karaa in wax ka mid ah qanjirka shahwada ragga sameeyaa uu isbeddelay.
Waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad sameyso baaritaano dheeraad ah si aad ugu hesho daryeelka caafimaad ee saxda ah.
Maxay ku xidhnaan kartaa?
Waxa caadi ah in wax iska bedelaan qanjirka shahwada ragga sameeyaa markaad ka weynaato 50 sanno jir. Inta badan ma aha khatar. Laakiin isbedel ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sabab u tahay caabuq/kacdoon ama kansar.
Kansarka qanjirka shahwada ragga sameeya ayaa ah nooca ugu badan ee kansarka ragga. Khatarta kansarka qanjirka shahwada ragga sameeyaa waa ay ka sii weynaataa, kolba marka aad ka sii weynaatid.
Qaar ka mid ah noocyada kansarka qanjirka shahwada ragga saameeyaa ayaa si tartiib tartiib ah u sameysma iyadoo aanad dareemin. Noocyada kale ee kansarka qanjidhka shahwada ragga ku dhaca ayaa si dhaqso ah u sameysma. Markaa kadibna waxaad u baahan doontaa daaweyn dhakhso ah. Waxa jira fursad ka weyn oo aad kaga bogsaneyso haddii kansar la ogaado xilli hore.
Waxaad adigu sii kaxeysan kartaa saaxiib ama waxa ku caawin doona turjumaan
Waxa kula joogi kara qof saaxiib ah ama qof qoyskaaga ka mid ah haddii aad rabto. Dadka qoyska iyo asxaabta ee kuu turjumaaya ma aha turjubaano oo ma qabanaayo xeerka sir hayntu.
Sidan ayaa loo sameynayaa tijaabada?
Kalkaaliso ayaa waxay tijaabada dhiiga ah irbad dhuuban kaga qaadeysa cududaada.
Waxaad tijaabada PSA-da ka dhiibi kartaa xarunta caafimaadka ama dhakhtar. Kalkaaliso ayaa waxay tijaabada dhiiga ah ku qaadeysaa irbad dhuuban. Dadka qaarkood waxay u arkaan inay xanuuneyso ama waxay dareemeyaan raaxo la'aan, laakiin si degdeg ah ayay taas u baa'badaa.
Goorma ayaan helayaa jawaabta tijaabada?
Waxaad heleysaa jawaab muddo dhowr toddobaad gudaheed ah. Waxaad heli doontaa warqad ama waxa lagula soo xiriiri doonaa telefoonka. Warqadda waxa loo dirayaa cinwaanka aad ka diiwaan gashan tahay. Waxaad u imaan doontaa baadhitaan cusub haddii tijaabadu ay muujisay in wax isbeddeleen.
Ma rabtaa inaad dhiibto tijaabada PSA?
Waxaad la xiriiri kartaa rugta caafimaadka haddii aad rabto inaad dhiibto tijaabada PSA.
Waxaad adigu had iyo jeer wici kartaa lambarka telefoonka ee 1177 haddii aad qabto su'aalo ama aad tallobixin uga baahan tahay telefoonka. Cidda ka jawaabeysaa waa kalkaalisooyin. Waxay ka jawaabi karaan haddii aad u baahan tahay inaad daryeel caafimaad raadsato.